Bilaogeram-paritra Lasibatry Ny Polisy Rosiana Noho Ny Resaka “Tafahoatra / Extremisme” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2013 22:46 GMT
Nampanginin'ny manampahefana any amin'ny faritra ao Rosia ireo bilaogera mpanohitra ao an-toerana, amin'ny fanenjehana azy ireny ho manao resaka ‘tafahoatra / extremisme’. Ny 6 Novambra 2013 teo i Andrey Teslenko, Siberiana bilaogera avy ao an-tanànan'i Novoaltaisk, no nanambara tao amin'ny bilaoginy LiveJournal [ru] fa nanatona azy ny polisy nanadina azy mikasika ilay lahatsary iray mitondra lohateny hoe “Ndeha ho ampahatsiahivintsika ireo mpisandoka sy mpangalatra mikasika ny taratasy Manifeste nataonytamin'ny 2002,” izay mivoaka ao amin'ny pejiny [ru] ao amin'ny tambajotra sosialy VKontakte.
Tsy Teslenko no tompony na nampakatra ila lahatsary — namerina nizara fotsiny no nataony lahatsoratra iray tamin'ny 28 Oktora 2013 [ru] an'i Alexey Navalny, ilay bilaogera be mpahalala avy amin'ny fanoherana. Ao anatin'ny lahatsorany i Navalny dia nanazava ny zava-nisy fa hoe ny fitsaram-paritra iray tao Novosibirsk dia nampiditra ilay lahatsary tamin'ny 2011 (afaka jerena tsara ao amin'ny fantsona Youtube an'i Navalny [ru] izay efa nahazoany mpijery maherin'ny 2 tapitrisa) ho ao anatin'ny lisitra federalin'ireo media “extremiste” [ru]. Tena marina fa tsy mazava mihitsy ny antony nahatonga ilay lahatsary, izay niantso ny olona hifidy izay antoko tiany ankoatra ny “United Russia” satria ry zareo “mpisandoka sy mpangalatra,” ho ao anatin'ny lisitra ahitàna sarinà zazalahy iray, manangan-tànana manao fiarahabàna Nazi, misy soratra hoe “Ajedaho ny Jiosy.”
Andro roa taty aoriana, ny 8 Novambra, navotsotra i Kalinichenko rehefa nanao fanekena. Nambara fa hoe noho izy “nanao tsinontsinona” ny fampiantsoan'ny fitsaràna no nihazonana azy. Mitatitra[ru] i Shipilov fa afaka andro vitsy dia ho ampangaina amin'ny fomba ofisialy araka ny Artikla 280 ao amin'ny Lalàna momba ny Heloka Bevava i Kalinichenko, “Fihaikàna ny olona hanao hetsika tafahoatra”. Mitondra mankany amin'ny famonjana mandritra ny 5 taona ilay fiampangàna. Hatramin'ny teo aloha kely teo dia tahaka ny azo nihomehezana ihany — 5 taona asa an-terivozona ho anà famerenana bitsika iray — saingy nasongadin'ny didim-pitsaràna azon'ny Pussy Riot sy ny fitohizan'ny fanenjehana amin'ny Raharaha Bolotnaya fa azo eritreretina ny zavatra rehetra. Tena tandindonin-doza lavitra noho izay efa nisy hatrizay ireo Rosiana bilaogera any amin'ny faritra, amin'ny maha-lavitra azy ireo miala amin'ny ivon'izay fifantohan-tsain'ny be sy ny maro ao Maosko.